hataru/हटारु: गुण्डाहरुको नेता नाता
केपी ढुंगाना- नागरिक
यसपटक पनि आठै दिनमा उड्यो चरी भुरुरुर्र। उडेर सरासर बल्खु दरबारको गजुरको टुप्पोमा गएर बस्यो चरी। पुलिसहरू हेरेको हेर्‍यै भए। फिरौती रकम र हतियार सहित रङ्गेहात समातिएको चरी किन र कसरी उड्यो? किन बल्खु दरबारकै गजुरको टुप्पोमा गएर बस्यो? पुलिसहरूलाई केही थाहा थिएन। यी चरीलाई त्यत्तिकै चरी भनिएको थिएन। जहिले जहाँ थुनिए पनि भुरुरुर्र उडन्सक्ने विशेषता नै हो उनको। होइन भने, उनको नागरिकताको नाम त छँदै थियो -दिनेश अधिकारी। पक्राउ पर्दा उनीबाट बरामद भएका सामग्रीका आधारमा उनीमाथि कार्वाही चलाउन सकिने पर्याप्त आधार थियो। तर, प्रहरीले केवल ‘केही सार्वजनिक ऐन' अन्तर्गतको अभियोग लगायो। यही आधारमा उनलाई काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि सहजै धरौटीमा रिहा गर्‍यो।
Posted by Nabin Bibhas at 10:27 PM